देउवालाई अध्यादेशको पासो- कांग्रेस फुटाउन १३ संसद भेला गर्दै ओली ! – GALAXY
देउवालाई अध्यादेशको पासो- कांग्रेस फुटाउन १३ संसद भेला गर्दै ओली !
काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वैशाख ०७७ मा ल्याएको राजनीतिक सम्वन्धी ऐन संशोधनका लागि ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेको नेपाली कांग्रेस अहिले त्यही शैलीमा अगाडि वढेको छ।
त्यतिबेला विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरु अहिले सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन हुने गरी अध्यादेश जारी गर्न वहादुरी प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
सत्तारुढ दलहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ संशोधन गर्न खोजेका हुन् । उक्त उपदफामा भनिएको छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’
तर अहिले नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल खेमासँग केन्द्रीय समितिमा मात्रै होइन संसदीय दलमा पनि ४० प्रतिशत हिस्सा पुग्दैन । अहिलेको अवस्थामा एमालेबाट माधवकुमार नेपाल समूह फुटेमा उनीहरुको सांसद पद स्वतः जान्छ । त्यही जोगाउन सरकारले अध्यादेश ल्याइदिन खोजेको हो ।
अध्यादेशमार्फत सरकारले उक्त उपदफामा रहेको ४० प्रतिशतको ठाउँमा नेपाल समूहलाई अनुकूल हुने गरी कुनै एकमा २० प्रतिशतको ब्यवस्था लागू गर्न खोजेको छ ।
त्यसो गर्दा एमालेबाट माधव नेपाल समूह अलग भएर गए पनि सांसद पद जाँदैन । माधव नेपाल खेमाको सांसद पद कायम रहनु भनेको बहुमतका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सुरक्षित हुनु हो ।
यो सम्भावनाको विकल्प तयार भए वा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरे पनि तत्काल एक÷दुई दिनमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्न सम्भव छैन। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार माधवकुमार नेपाल समूहले नयाँ दल दर्ता गर्न ४५ दिन कुनुुपर्ने हुन्छ।
निर्वाचन आयोगले ४५ दिनभित्र नयाँ दल दर्ता हुने÷नहुने निर्णय दिन सक्छ। विधान, घोषणापत्र र पाँच सय जनाको समर्थन जुटाउन पनि नेपाल समुहलाई केही समय लाग्ने छ। त्यसमाथि निर्वाचन आयोगका अधिकांश पदाधिकारी केपी ओलीको कार्यकालमा नियुक्त भएको हुनाले निर्वाचन आयोगले तत्काल दल दर्ताको निर्णय गर्ने सम्भावना पनि कम छ। नेपाल समूह अन्य दलमा गाभिएको घोषणा पनि पनि ४५ दिन पर्खनु पर्ने कानुनी वाध्यता छ।